Hagaha ugu dambeeya ee daabacayaasha 3D | qalab bilaash ah
Hagaha ugu dambeeya ee daabacayaasha 3D
Isaac | | La cusboonaysiiyay 25/02/2022 13:33 | Daabacaadda 3D
Wax-soo-saarka wax-soo-saarka wax-soo-saarka wax-soo-saarka wuxuu leeyahay qaybo badan oo codsi ah, labadaba qaybta firaaqada iyo warshadaha iyo farsamada. Madbacadaha 3D waxay u yimaadeen inay wax ka beddelaan habka aad wax u daabacdo waxayna dhisaan dhismayaal cusub, kuwaas oo ka koobnaan kara walxo yaryar ilaa unug nool iyo xitaa guryo, ama qaybo hawada sare ah oo loogu talagalay matoorada.
Ilaa dhowr sano ka hor, daabacaadda 2D waxay ahayd shayga khayaaliga sayniska. Qaar badan ayaa ku riyooday inay awoodaan inay daabacaan walxaha halkii ay ka qori lahaayeen sawirro ama qoraal warqad XNUMXD fudud ah. Hadda tignoolajiyada ayaa aad u qaan-gaar ah oo ay jiraan tignoolajiyada aan la tirin karin, noocyada, moodooyinkaiwm. Hagahan waxaad wax badan ka baran kartaa daabacadahan gaarka ah.
1 Waa maxay voxel?
2 Waa maxay daabacaha 3D
2.0.1 Taariikhda daabacaadda 3D
2.1 Waa maxay wax soo saarka wax lagu daro ama AM
2.2 Waa maxay bioprinting
2.3 Sida madbacadaha 3D u shaqeeyaan
3 Naqshadaynta 3D iyo daabacaadda 3D
3.1 software daabacaha 3D
3.1.2 Daaweynta Ultimaker
3.1.4 fikrad abuure
3.1.10 mesh shaybaar
3.2 Daabacaadda 3D
3.3 habsocodka ka dib
4 Su'aalaha badanaa la isweydiiyo
4.0.1 Sida loo furo STL
4.0.2 Qaababka 3D
4.0.3 Laga soo bilaabo qaabka dhabta ah (iskaanka 3D)
5 Codsiyada iyo isticmaalka daabacaha 3D
5.1 prototypes injineernimada
5.2 dhismaha iyo dhismaha
5.3 Naqshadeynta iyo habeynta dahabka iyo qalabyada kale
5.4 Madadaalada: waxyaabaha lagu sameeyay daabacaha 3D
5.5 Warshadaha wax soo saarka
5.6 daabacayaasha 3D ee daawada: dhakhtarka ilkaha, prosthetics, bioprinting
5.7 Cunto / cunto daabacan
6 Macluumaad dheeraad ah
Waa maxay voxel?
Haddii aanad weli aqoon codka, waa muhiim inaad fahamto waxa ay tahay, maadaama daabacaadda 3D ay muhiim tahay. Waa soo gaabinta Ingiriisida « pixel volumetric », unug cubic ah oo ka kooban shay saddex-cabbir ah.
Waxa kale oo jira unugyo kale oo ay ka mid yihiin telka (texture element ama pixel texture), kaas oo ah unugga ugu yar ee texture ee lagu dabaqo dusha sare ee sawirada kombiyuutarka, ama tixel ( pixel tactile), oo ah neologism oo tilmaamaya nooc. ee tignoolajiyada haptic ee shaashadaha taabashada, taas oo u oggolaanaysa in lagu sawiro taabashada textures kala duwan.
Si kale haddii loo dhigo, waxay noqon lahayd 2D oo u dhiganta pixel. Iyo, sida aad ku arki karto sawirka kore, haddii qaabka 3D loo qaybiyo xabadaha, mid kasta oo iyaga ka mid ah wuxuu noqon lahaa voxel. Waa muhiim in la qeexo waxa ay tahay, maadaama qaar ka mid ah daabacayaasha 3D ee horumarsan ay u oggolaanayaan xakamaynta voxel kasta inta lagu jiro daabacaadda si loo gaaro natiijooyin wanaagsan.
Waa maxay daabacaha 3D
Daabacaha 3D waa mashiin awood u leh inuu daabaco walxo mug leh oo ka yimid naqshad kumbuyuutareedka. Taasi waa, sida daabacaadda caadiga ah, laakiin halkii aad ku daabacan lahayd dusha siman iyo 2D, wuu sameeyaa oo leh saddex cabbir (ballac, dherer iyo dherer)). Naqshadaynta natiijooyinkan lagu gaari karo waxay ka iman karaan qaabka 3D ama CAD, iyo xitaa shay jireed oo dhab ah oo la sameeyay. Sawirka XNUMXD.
Wayna awoodaan daabac dhammaan noocyada shay, laga bilaabo shay fudud sida koob kafee ah, ilaa kuwo aad u adag sida unugyo nool, guryo, iwm. Si kale haddii loo dhigo, riyada qaar badan oo rabeen in sawiradooda daabacan ay ka soo noolaadaan waraaqaha ayaa halkan jooga, waana kuwo raqiis ah oo ku filan in loo isticmaalo wax ka baxsan warshadaha, sidoo kale guriga.
Taariikhda daabacaadda 3D
Taariikhda daabacaadda 3D waxay u muuqataa mid aad u dhow, laakiin runtu waxay tahay inay dib u noqoto dhowr sano. Wax walba waxay ka soo baxaan Inkjet printer laga soo bilaabo 1976, kaas oo horumar laga sameeyey in khad daabacaadda lagu beddelo agab si loo soo saaro walxo mug leh, iyada oo la qaadayo tillaabooyin muhiim ah iyo calaamadaynta horumarka tignoolajiyadan ilaa mishiinnada hadda jira:
Sannadkii 1981-kii qalabkii ugu horreeyay ee daabacaadda 3D ayaa la ansixiyay. wuu sameeyay Dr Hideo Kodama, ee Machadka Cilmi-baarista Warshadaha ee Degmada Nagoya (Japan). Fikradda waxay ahayd in la isticmaalo 2 siyaabood oo kala duwan oo uu u ikhtiraacay wax-soo-saarka wax-ku-darka isagoo isticmaalaya xabagta xasaasiga ah, oo la mid ah sida chips-ka loo sameeyo. Si kastaba ha ahaatee, mashruuciisii ​​waa laga tagi lahaa dano la'aan iyo maalgelin.
Isla tobankii sano ee la soo dhaafay, injineero Faransiis ah Alain Le Méhauté, Olivier de Wittte iyo Jean-Claude André, waxay bilaabeen inay baaraan tignoolajiyada wax soo saarka iyada oo la adkeynayo resins-ka sawir-qaadista oo leh daawaynta UV. CNRS ma ansixin doonto mashruuca sababo la xiriira la'aanta meelaha laga codsado. Iyo, in kasta oo ay codsadeen patent 1984-kii, ugu dambeyntii waa laga tagi lahaa.
Charles hullSannadkii 1984-kii, wuxuu la aasaasay shirkadda 3D Systems, isaga oo ikhtiraacay stereolithography (SLA). Waa nidaam shayga 3D laga daabacan karo qaab dhijitaal ah.
La nooca SLA ugu horeysay 3D mashiinka Waxa la bilaabay in la suuqgeeyo 1992-kii, laakiin qiimihiisu aad buu u sarreeyay oo weli waxa uu ahaa qalab aasaasi ah.
Sannadkii 1999 kii ayaa la calaamadeeyay dhacdo kale oo weyn, markan oo la tixraacayo bioprinting, awood u leh in ay abuurto xubin bini'aadan shaybaarka, gaar ahaan kaadiheysta kaadiheysta iyadoo la isticmaalayo dahaarka synthetic ee unugyada asliga ah laftooda. Marxaladdan muhiimka ah waxay asal ahaan ka timid Machadka Wake Forest ee Daawada Dib-u-soo-nooleynta, iyada oo albaabada u furaysa soo saarista xubnaha taranka.
El Kelyaha daabacan ee 3D waxay imaan doontaa 2002. Waxay ahayd nooc si buuxda u shaqaynaya oo awood u leh inuu dhiigga sifeeyo oo uu soo saaro kaadida xayawaanka. Horumarintan ayaa sidoo kale laga abuuray isla machad.
Adrian Bowyer wuxuu aasaasay RepRap Jaamacadda Qubeyska 2005. Waa hindise il furan oo lagu dhisayo daabacayaasha 3D raqiis ah oo iskood isu beddelaya, taas oo ah inay daabacan karaan qaybo iyaga u gaar ah oo isticmaalaya agabka la isticmaalo sida Fillaha 3D.
Sannad ka dib, in 2006, tignoolajiyada SLS ayaa timid iyo suurtogalnimada wax-soo-saarka ballaaran ee loo yaqaan 'laser'. Iyada, albaabbada isticmaalka warshadaha ayaa la furay.
2008 waxay noqon doontaa sanadka daabacaadda ugu horreeya ee leh karti is-ku-noqosho. Waxay ahayd Darwin ee RepRap. Isla sannadkaan, adeegyada wax-abuurka ayaa sidoo kale bilaabmay, mareegaha ay bulshadu ku wadaagi karaan naqshadahooda 3D si kuwa kale ay ugu daabacaan daabacaadadooda 3D.
Horumar la taaban karo ayaa sidoo kale laga sameeyay 3D prosthetics ogolaan. 2008 waxay noqon doontaa sanadka qofka ugu horreeya uu awoodi doono inuu socdo iyada oo ay ugu wacan tahay lugta daabacan ee prosthetic.
2009 waa sanadkii Makerbot iyo qalabyada ee daabacayaasha 3D, si isticmaaleyaal badan ay u iibsan karaan raqiis oo ay u dhistaan ​​daabacadooda laftooda. Taasi waa, ku jihaysan samaynta iyo DIY. Isla sanadkaas, Dr. Gabor Forgacs wuxuu sameeyay tallaabo kale oo weyn oo ku saabsan bioprinting, isagoo awood u leh inuu abuuro xididdada dhiigga.
El diyaarad ugu horeysay daabac 3D waxay iman doontaa 2011, oo ay abuureen injineero ka socda Jaamacadda Southampton. Waxay ahayd naqshad aan cidina wadin, laakiin waxaa lagu soo saari karaa 7 maalmood oo keliya iyo miisaaniyad 7000 Yuuro ah. Tani waxay furtay mamnuucida soo saarista alaabooyin kale oo badan. Dhab ahaantii, isla sannadkaan nooca baabuur ee ugu horreeya ee daabacan ayaa iman doona, Kor Ecologic Urbee, oo leh qiimayaal u dhexeeya € 12.000 iyo € 60.000.
Isla markaana, daabacaaddu waxay bilowday adeegsiga agabka sharafta leh sida lacag isteerin ah iyo 14kt dahab ah, sidaas darteed u furto suuq cusub oo loogu talagalay dahablayaasha, iyagoo awood u leh inay abuuraan qaybo ka jaban iyadoo la adeegsanayo walxaha saxda ah.
In 2012 ay iman lahayd daanka prosthetic ugu horeysay 3D daabacan waxaa mahad leh koox cilmi baarayaal Belgian iyo Dutch ah.
Haddana suuqu ma joogsan raadinta codsiyada cusub, hagaajinta waxqabadkooda, iyo in la sii wado ballaarinta ganacsiyada iyo guryaha.
Hadda, haddii aad la yaabban tahay waa imisa qiimaha daabacaada 3d, waxay u dhaxayn kartaa wax ka yar € 100 ama € 200 marka loo eego kuwa ugu jaban iyo kuwa ugu yar, ilaa € 1000 ama ka badan marka la eego kuwa ugu horumarsan iyo kuwa ka weyn, iyo xitaa qaar ku kacaya kumanaan yuuro ee warshadaha qaybta.
Waa maxay wax soo saarka wax lagu daro ama AM
Daabacaadda 3D wax kale maaha wax soo saarka wax lagu daro, taas oo ah, habka wax soo saarka, kaas oo, si loo abuuro moodooyinka 3D, oo isku dhejiya lakabyada alaabta. Aad bay uga soo horjeedaa wax-soo-saarka wax-soo-saarka, kaas oo ku salaysan xannibaadda bilawga ah (sheet, ingot, block, bar, ...) kaas oo walxaha si tartiib tartiib ah looga saaro ilaa badeecada ugu dambeysa la gaaro. Tusaale ahaan, sida wax-soo-saarka kala-goynta ah, waxaad haysataa gabal lagu xardhay lathe, kaas oo ka bilaabma alwaax.
Tan waa ku mahadsan tahay habka kacaanka Waxaad ka heli kartaa wax soo saar raqiis ah oo walxaha guriga ah, moodooyinka injineerada iyo naqshadeeyayaasha, helida noocyada tijaabada, iwm. Intaa waxaa dheer, wax-soo-saarkan wax-soo-saarka ah ayaa suurtogal ka dhigay in la abuuro qaybo hore oo aan suurtogal ahayn hababka kale sida caaryada, extrusion, iwm.
Waa maxay bioprinting
Bioprinting waa nooc gaar ah oo wax soo saarka wax lagu daro ah, oo sidoo kale lagu abuuray daabacayaasha 3D, laakiin natiijooyinkoodu aad uga duwan yihiin agabka aan shaqaynayn. Laga yaabaa samee unugyo nool iyo xubno, laga bilaabo maqaarka aadanaha ilaa xubin muhiim ah. Waxa kale oo ay soo saari karaan agab noole la socon kara, sida kuwa sanaaciga ama qalabka lagu dhejiyo.
Tan waxaa lagu gaari karaa laba hab:
Qaab dhismeed, nooc ka mid ah taageerada ama qolofku waxay ka samaysan yihiin waxyaabo isku dhafan polymers bioocompatible inaan jidhku diidin, oo unugyaduna ay iyaga aqbalaan. Dhismayaashan waxa lagu soo bandhigaa bioreactor si ay unugyadu u degi karaan oo marka jidhka la geliyo, waxay si tartiib tartiib ah u habayn doonaan unugyada noolaha martida loo yahay.
Waa muuqaal xubnaha ama unugyada lakabka lakabka, laakiin halkii aad isticmaali lahayd alaabta sida balaastiga, ama kuwa kale, dhaqamada unugyada nool iyo habka xidhidhiyaha loo yaqaan biopaper (walxaha biodegradable) si loo qaabeeyo.
Sida madbacadaha 3D u shaqeeyaan
El sida uu u shaqeeyo 3d printer Aad ayey uga fudud tahay sida ay u muuqan karto:
Waxaad ka bilaabi kartaa eber adigoo isticmaalaya software ilaa Qaabaynta 3d ama naqshadeynta CAD si aad u soo saarto moodelka aad rabto, ama soo dejiso feyl horay loo sameeyay, oo xitaa isticmaal iskaanka 3D si aad u hesho qaabka 3D shay jireed oo dhab ah.
Hadda waxaad haysataa Qaabka 3D ee lagu kaydiyay fayl dhijitaal ah, taas oo ah, laga bilaabo macluumaadka dhijitaalka ah ee leh cabbirka iyo qaababka shayga.
Waxyaabaha soo socdaa waa goyn, habka kaas oo qaabka 3D "lagu gooyo" boqollaal ama kun oo lakabyo ama xaleef. Taasi waa, sida loo jeexjeexo moodalka by software.
Marka isticmaaluhu uu gujiyo badhanka daabacaadda, daabacaha 3D ee ku xidhan PC-ga iyadoo la adeegsanayo fiilada USB, ama network, ama feylka lagu gudbiyay kaarka SD ama qalinka, ayaa noqon doona waxaa tarjumay processor-ka daabacaha.
Laga soo bilaabo halkaas, daabacaha ayaa tagi doona xakamaynta matoorada in la dhaqaajiyo madaxa oo sidaas loo abuuro lakab by lakabka ilaa qaabka ugu dambeeya la gaaro. Si la mid ah daabacaha caadiga ah, laakiin mugga ayaa u kori doona lakab.
Habka lakabyadaas loo sameeyay waxaa laga yaabaa inay ku kala duwanaato tignoolajiyada kuwaas oo leh daabacadaha 3D. Tusaale ahaan, waxay noqon karaan extrusion ama resin.
Naqshadaynta 3D iyo daabacaadda 3D
Markaad ogaato waxa uu yahay daabacaha 3D iyo sida uu u shaqeeyo, waxa xiga waa ogow software-ka ama qalabka lagama maarmaanka ah daabacaadda. Wax muhiim ah haddii aad rabto inaad ka baxdo sawir-gacmeed ama fikrad una gudub shay 3D dhab ah.
Waa inaad ogaataa inay jiraan dhowr nooc oo aasaasi ah oo software ah oo loogu talagalay daabacayaasha 3D:
Dhinaca kale waxaa jira barnaamijyo ah Qaabaynta 3D ama naqshadaynta 3D CAD kaas oo isticmaaluhu uu ka abuuri karo naqshadaha xoqan, ama wax ka beddeli karo.
Dhanka kale waxaa jira wax la yiraahdo software slicer, kaas oo u beddela qaabka 3D tilmaamo gaar ah oo lagu daabaco daabacaha 3D.
Waxa kale oo jira software wax ka beddelka mesh. Barnaamijyadan, sida MeshLab, ayaa loo adeegsadaa in lagu beddelo meshes moodooyinka 3D marka ay dhibaato keenaan marka la daabacayo, maadaama laga yaabo in barnaamijyada kale aanay xisaabta ku darsan habka ay u shaqeeyaan madbacadaha 3D.
software daabacaha 3D
Waa kuwan qaar ka mid ah software daabacaadda 3d ugu fiican, lacag-bixin iyo bilaash labadaba, loogu talagalay Qaabaynta 3d y Naqshadaynta CAD, iyo sidoo kale software bilaash ah ama il furan:
Google and Last Software ayaa la sameeyay SketchUp, inkastoo ay ugu dambeyntii u gudubtay gacanta shirkadda Trimble. Waa software gaar ah oo bilaash ah (oo leh noocyo kala duwan oo qorshooyin lacag-bixineed ah) iyo sidoo kale suurtagalnimada in la kala doorto inta u dhaxaysa isticmaalka desktop-ka Windows ama shabakadda (nidaam hawleed kasta oo leh shabakad shabakad ku habboon).
Barnaamijkan oo ah naqshadaynta garaafyada iyo qaabaynta 3D waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican. Iyada oo aad ku abuuri karto nooc kasta oo dhismo ah, inkasta oo si gaar ah loogu talagalay naqshadaha naqshadaha, naqshadeynta warshadaha, iwm.
Ultimaker ayaa sameeyay Cura, codsi si gaar ah loogu talagalay daabacayaasha 3D iyada oo cabirrada daabacaadda lagu beddeli karo loona beddeli karo G code-ka, waxa sameeyay David Raan markii uu ka shaqaynayey shirkaddan, inkasta oo si fudud loo dayactiro uu furto koodka iyada oo la raacayo liisanka LGPLv3. Hadda waa il furan, taas oo awood u siinaysa la jaanqaadka software-ka CAD qolo saddexaad.
Maalmahan, aad bay caan u tahay oo waa a oo ah kuwa ugu isticmaalka badan aduunka, oo ay ku jiraan in ka badan 1 milyan isticmaale oo ka kala socda qaybo kala duwan.
Shirkadda Prusa waxay sidoo kale rabtay inay abuurto software u gaar ah. Waa aaladda isha furan ee loo yaqaan PrusaSlicer. App-kan aad buu qani ugu yahay marka la eego shaqooyinka iyo sifooyinka, wuxuuna leeyahay horumar firfircooni leh.
Barnaamijkan waxaad awoodi doontaa inaad u dhoofiso moodooyinka 3D faylalka asalka ah ee la qabsan karo daabacayaasha Prusa asalka ah.
Barnaamijkan kale waa bilaash, waxaana lagu rakibi karaa labadaba Microsoft Windows, macOS, iyo GNU/Linux. Ideamaker waxaa si gaar ah loogu talagalay badeecooyinka Raise3D, waana qaybiye kale oo aad ku maareyn karto tusaalahaaga daabacaadda si degdeg ah.
FreeCAD waxay u baahan tahay hordhacyo kooban, waa mashruuc il furan oo gebi ahaanba bilaasha u ah naqshadaynta 3D CAD. Iyada oo aad ku abuuri karto nooc kasta, sida aad ku samayn lahayd Autodesk AutoCAD, nooca lacagta ah iyo koodka lahaanshaha.
Way fududahay in la isticmaalo, oo leh interface dareen leh oo qani ku ah qalabka lagu shaqeeyo. Taasi waa sababta ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan. Waxay ku salaysan tahay OpenCASCDE waxaana lagu qoray C++ iyo Python, iyadoo hoos timaada shatiga GNU GPL.
Aqoon kale oo weyn oo adduunka ah ee software-ka bilaashka ah. Software Tani weyn waxaa loo isticmaalaa xitaa by xirfadlayaasha badan, siiyey awoodda iyo natiijada waxay bixisaa. Laga heli karo meelo badan, sida Windows iyo Linux, iyo hoos shatiga GPL.
Laakiin waxa ugu muhiimsan ee ku saabsan software-kan waa in aysan u adeegin oo kaliya iftiiminta, samaynta, animation iyo abuurista sawirada saddex-geesoodka ah loogu talagalay fiidiyowyada firfircoon, ciyaaraha fiidiyowga, rinjiyeynta, iwm., laakiin sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa qaabaynta 3D oo waxaad abuuri kartaa waxaad u baahan tahay inaad daabacdo.
Waa madal la mid ah FreeCAD, laakiin waa software la iska leeyahay oo la bixiyo. Shatiyadaadu waxay leeyihiin a qiimo sare, laakiin waa mid ka mid ah barnaamijyada loogu isticmaalo heer xirfadeed. Software-kan waxaad awoodi doontaa inaad abuurto naqshadaha 2D iyo 3D CAD labadaba, adoo ku daraya dhaqdhaqaaqa, textures badan oo qalab ah, iwm.
Waxay diyaar u tahay Microsoft Windows, mid ka mid ah faa'iidooyinkeedana waa laqabsiga Faylasha DWF, kuwaas oo ah kuwa ugu baahsan oo ay horumarisay shirkadda Autodesk lafteeda.
Autodesk Fusion 360 Waxay leedahay waxyaabo badan oo la mid ah AutoCAD, laakiin waxay ku salaysan tahay madal daruureed, si aad uga shaqeyso meel kasta oo aad rabto oo aad mar walba haysato nooca ugu horumarsan ee software-kan. Xaaladdan oo kale, waa inaad sidoo kale bixisaa rukhsadda, kuwaas oo aan run ahaantii raqiis ahayn.
TinkerCAD waa barnaamij kale oo qaabaynta 3D kaas oo waxaa loo isticmaali karaa online, laga bilaabo biraawsarkaaga shabakadda, kaas oo si weyn u furaya fursadaha aad ka isticmaali karto meel kasta oo aad u baahan tahay. Tan iyo 2011 waxay heshay isticmaalayaasha, waxayna noqotay goob aad caan u ah isticmaaleyaasha daabacadaha 3D, iyo xitaa xarumaha waxbarashada, maadaama qalooca waxbarashadu aad uga fudud yahay kan Autodesk.
Waxaa loo heli karaa Linux, Windows, iyo macOS, oo gebi ahaanba waa bilaash oo il furan. MeshLab waa nidaamka software farsamaynta mesh 3D. Hadafka software-kani waa in lagu maareeyo qaab-dhismeedyadan tafatirka, dayactirka, kormeerka, samaynta, iwm.
Shirkadda Yurub ee Dassault Systèmes, oo ka socota shirkaddeeda SolidWorks Corp., ayaa soo saartay mid ka mid ah barnaamijyada CAD ugu fiican uguna xirfadda leh ee 2D iyo 3D qaabaynta. SolidWorks waxay noqon kartaa beddelka Autodesk AutoCAD, laakiin waa si gaar ah loogu talagalay qaabaynta hababka farsamada. Ma aha bilaash, mana aha il furan, waxayna diyaar u tahay Windows.
Ugu dambeyntii Creo waa mid kale oo ka mid ah barnaamijyada CAD/CAM/CAE ugu fiican daabacayaasha 3D waxaad ka heli kartaa. Waa software ay samaysay PTC oo kuu ogolaanaya inaad naqshadayso tiro badan oo alaab tayo sare leh, si degdeg ah oo shaqo yar leh. Dhammaan mahad waxa iska leh interface dareen leh oo loogu talagalay in lagu wanaajiyo isticmaalka iyo wax soo saarka. Waxaad u horumarin kartaa qaybo wax-soo-saarka wax-ka-soo-saarka iyo kala-goynta, iyo sidoo kale jilitaanka, naqshadaynta wax-soo-saarka, iwm. Waxaa la bixiyaa, il xiran oo kaliya loogu talagalay Windows.
Talaabada xigta ee lagu nashqadeynayo iyadoo la isticmaalayo software-ka sare waa daabacaadda dhabta ah. Taasi waa, marka laga bilaabo faylkaas qaabka daabacaha 3D wuxuu bilaabaa inuu abuuro lakabyada ilaa dhamaystirka qaabka iyo helitaanka naqshadda dhabta ah.
Este geedi socodku waxa uu qaadan karaa wax ka badan ama ka yar, iyadoo ku xiran xawaaraha daabacaadda, kakanaanta gabalka, iyo cabbirkeeda. Laakiin waxay qaadan kartaa dhowr daqiiqo ilaa saacado. Inta lagu jiro habkan, daabacaha ayaa laga tagi karaa iyada oo aan la ilaalin, inkastoo mar walba ay wanaagsan tahay in la kormeero shaqada waqti ka waqti si looga hortago dhibaatooyinka soo afjaraya natiijada kama dambaysta ah.
habsocodka ka dib
Dabcan, marka qaybtu dhammaato daabacaadda daabacaadda 3D, shaqadu halkaas kuma dhammaanayso inta badan. Kadibna kuwa kale ayaa badanaa yimaada Tallaabooyin dheeri ah oo loo yaqaan hab-socodka ka dib sida:
In meesha laga saaro qaybo ka mid ah kuwa u baahan in la soo saaro oo aan ka mid ahayn qaabka ugu dambeeya, sida saldhig ama taageero loo baahan yahay in qaybtu istaagto.
Ciid ama nadiifi oogada si aad u gaadho dhammays wanaagsan.
Daawaynta dusha sare ee shayga, sida varnishing, rinjiyeynta, qubeyska, iwm.
Qaybaha qaarkood, sida qaybo bir ah, ayaa laga yaabaa inay u baahdaan habab kale sida dubista.
Haddii ay dhacdo in gabal uu ahaa in loo qaybiyo qaybo sababtoo ah ma aysan suurtagal ahayn in la dhiso gebi ahaanba sababtoo ah cabbirkeeda, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in lagu daro qaybaha (urur, xabag, alxanka ...).
Ugu dambeyntii, qaybta ku saabsan FAQs ama su'aalaha iyo jawaabaha inta badan la isweydiiyo taas oo inta badan soo baxda marka la isticmaalayo daabacaha 3D. Kuwa ugu badan ee la raadiyo waa:
Sida loo furo STL
Mid ka mid ah su'aalaha ugu badan ayaa ah sidee u furan kartaa ama u arki kartaa faylka .stl. Kordhintan waxaa loola jeedaa faylalka stereolithography waxaana la furi karaa oo xitaa tafatir karaa Dassault Systèmes CATIA software ka mid ah barnaamijyada kale ee CAD sida AutoCAD iwm.
Marka lagu daro STL-yada, waxaa sidoo kale jira faylasha kale sida .obj, .dwg, .dxfiwm. Dhammaantood waa kuwo caan ah oo lagu furi karo barnaamijyo badan oo kala duwan oo xitaa loo beddelo qaabab u dhexeeya.
Waa inaad ogaataa inaadan mar walba ahayn inaad adigu abuurto sawirka 3D, waxaad heli kartaa moodooyin diyaarsan oo nooc kasta ah, laga bilaabo tirooyinka ciyaaraha fiidiyowga ama filimada, alaabta guriga ee wax ku oolka ah, alaabta carruurtu ku ciyaarto, qalabka saafiga ah, maaskaro, telefoon kiisaska, iwm. Raspberry Pi, iyo qaar kaloo badan. Waxa jira shabakado badan oo badan oo leh maktabado kuwaas Hababka diyaarka ah in la soo dejiyo oo la daabaco daabacahaaga 3D Goobaha lagu taliyay qaarkood waa:
Sawirka Daabacaadda XYZ 3D
la hagaajin karo
Qorshayaasha Casharka Dremel
Laga soo bilaabo qaabka dhabta ah (iskaanka 3D)
Fursad kale, haddii waxa aad rabto waa inaad dib u abuurto clone qumman ama nuqul ka mid ah shay kale oo 3D ah, waa in la isticmaalo a 3d iskaanka. Waa aalado kuu oggolaanaya inaad la socoto qaabka shay, u wareejinta moodalka faylka dhijitaalka ah una oggolaanaya daabacaadda.
Codsiyada iyo isticmaalka daabacaha 3D
Ugu dambeyntii, daabacayaasha 3D waa waxaa loo isticmaali karaa codsiyo badan. Isticmaalka ugu caansan ee la heli karo waa:
Mid ka mid ah adeegsiyada ugu caansan ee daabacayaasha 3D ee goobta xirfadleyda ayaa ah soo saarista degdega ah, taas oo ah, nooc dhakhso leh. Ama si aad u hesho qaybo loogu talagalay baabuurka tartanka, sida Formula 1, ama in la abuuro noocyada matoorada ama habab adag.
Sidan ayaa injineerka loo ogolyahay in uu qayb aad uga dheereeyo in loo diri lahaa warshad wax soo saara, sidoo kalena uu heli lahaa. noocyada tijaabada si loo eego haddii qaabka ugu dambeeya uu u shaqayn doono sidii la filayay.
dhismaha iyo dhismaha
sawir: © www.StefanoBorghi.com
Dabcan, oo si dhow ula xidhiidha kor ku xusan, waxay sidoo kale loo isticmaali karaa dhis dhismayaal oo samee tijaabooyin farsamo naqshadeeyayaasha, ama dhisaan qaybo gaar ah oo aan lagu soo saari karin habraacyo kale, samee tusaalayaal dhismayaal ama shay kale sida muunado ama moodallo, iwm.
Intaa waxaa dheer, soo ifbaxa daabacayaasha la taaban karo iyo agab kale, ayaa sidoo kale albaabada u furay in ay awood u leeyihiin in si degdeg ah oo hufan loo daabaco guryaha si ixtiraam leh oo deegaanka ah. Xitaa waxaa la soo jeediyay in loo qaado nooca daabacaadda meerayaasha kale ee mustaqbalka gumeysiga.
Naqshadeynta iyo habeynta dahabka iyo qalabyada kale
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu baahsan waa dahabka daabacan. Hab lagu helo qaybo gaar ah oo degdeg ah, oo leh astaamo la gaaryeelay. Qaar ka mid ah daabacayaasha 3D waxay daabacan karaan qaar soo jiidasho leh iyo qalabyo ah sida naylon ama caag midabyo kala duwan leh, laakiin sidoo kale waxaa jira qaar kale oo loo isticmaalo goobta dahabka xirfadlayaasha ah oo isticmaali kara biraha sharafta leh sida dahab ama qalin.
Halkan waxa kale oo aad ku dari kartaa qaar ka mid ah alaabooyinka iyagana la daabacay dhawaanahan, sida dharka, kabaha, qalabka moodada, IWM
Madadaalada: waxyaabaha lagu sameeyay daabacaha 3D
Ha iloobin firaaqo, taas oo ah waxa badan oo daabacadaha 3D guriga loo isticmaalo. Adeegsigani aad buu u kala duwanaan karaa, laga bilaabo abuurista taageero shakhsiyeed, horumarinta qurxinta ama qaybaha haadka, rinjiyeynta tirooyinka jilayaasha khayaaliga ah ee aad jeceshahay, kiisaska mashaariicda DIY, koobabka gaarka ah, iwm. Taasi waa, isticmaalka aan faa'iido doonka ahayn.
Warshadaha wax soo saarka
Dad badan warshadaha wax soo saarka waxay horey u isticmaaleen daabacadaha 3D si ay u soo saaraan alaabtooda. Ma aha oo kaliya sababtoo ah faa'iidooyinka noocan ah ee wax soo saarka wax lagu daro, laakiin sidoo kale sababtoo ah mararka qaarkood, marka la eego kakanaanta naqshadeynta, suurtagal maaha in lagu abuuro hababka dhaqameed sida extrusion, isticmaalka caaryada, iwm. Intaa waxaa dheer, madbacadahani way horumareen, iyagoo awood u leh inay isticmaalaan qalab aad u kala duwan, oo ay ku jiraan daabacaadda qaybo bir ah.
Sidoo kale waa wax caadi ah in la sameeyo qaybo baabuurta, iyo xitaa diyaaradaha, maadaama ay oggol yihiin in qaybo ka mid ah la helo kuwaas oo aad u fudud oo waxtar leh. Kuwa waaweyn sida AirBus, Boeing, Ferrari, McLaren, Mercedes, iwm, ayaa hore u haystay.
daabacayaasha 3D ee daawada: dhakhtarka ilkaha, prosthetics, bioprinting
Qayb kale oo ka mid ah qaybaha ugu weyn ee loo isticmaalo daabacadaha 3D waa goobta caafimaadka. Waxaa loo isticmaali karaa ujeedooyin badan:
U soo saar qalabka ilkuhu si sax ah, iyo sidoo kale xirmooyinka, iwm.
Bioprinting ee unugyada sida maqaarka ama xubnaha taranka mustaqbalka.
Noocyada kale ee sanaaciga ah ee dhibaatooyinka lafaha, mootooyinka ama murqaha.
Cunto / cunto daabacan
Daabacadaha 3D waxaa loo isticmaali karaa in lagu abuuro qurxinta taarikada, ama in lagu daabaco nacnac sida sholaatada qaab gaar ah, iyo xitaa cuntooyin kale oo badan oo kala duwan. Sidaa darteed, warshadaha cuntada waxa kale oo ay doonaysaa in ay shaqaalaysiiso faa'iidooyinka mishiinadan.
Intaa waxaa dheer, hab of kor u qaadida cuntada, sida daabacaadda hilibka hilibka laga sameeyay borotiinnada dib loo warshadeeyay ama laga saaray waxyaabo waxyeello leh oo laga yaabo inay ku jiraan hilibka dabiiciga ah. Waxa kale oo jira qaar ka mid ah mashaariicda lagu abuurayo badeecooyin loogu talagalay vegans ama khudradda kuwaas oo u ekaysiiya hilibka dhabta ah, laakiin laga sameeyay borotiinka khudradda.
Iyo, dabcan, daabacayaasha 3D waa qalab daadadka doona xarumaha waxbarashada, maadaama ay yihiin wehel fantastik ah fasallada. Iyaga, macalimiintu waxay soo saari karaan moodallo si ay ardaydu wax ugu bartaan si wax ku ool ah oo dareen leh, ama ardaydu laftoodu waxay kobcin karaan awooddooda caqli-galnimo oo ay abuuraan dhammaan noocyada waxyaallaha.
Daabacadaha Resin 3D ugu fiican
Qaybaha spare printer 3D
Filaments iyo resin ee daabacayaasha 3D
Madbacadaha 3D Warshadaha ugu Fiican
Madbacadaha 3D ee ugu fiican guriga
Madbacadaha 3D ee ugu jaban
Sida loo doorto daabacaha 3D ee ugu fiican
Dhammaan ku saabsan qaababka daabacaadda STL iyo 3D
Noocyada daabacadaha 3D
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Daabacaadda 3D » Hagaha ugu dambeeya ee daabacayaasha 3D
Noocyada daabacayaasha 3D iyo sifooyinkooda
Schottky diode: waa maxay iyo waxa gaar ah oo ku saabsan
Imtixaan IngiriisiTijaabi Catalankedis isbaanishka